भियतनामबाट हात झिकेयता अमेरिका, रुस र चीनबीच अफ्रिकी देशमा एउटा त्रिकोणात्मक लडाइँ चलिरहेको छ । रुसले अमेरिकाको निन्दा गर्छ । अमेरिकाको कूटनीति दक्षिणपूर्वी एसियामा अल्झेको हुनाले ऊ निरन्तर कमजोर भएको छ । उसका विश्वव्यापी नीति कमजोर भएको छ । अमेरिकाले एकातिर समाजवादीसँग पनि मुकाबिला गर्नुपर्ने, उता चिनियाँ र रसियन धुरीसँग पनि मुकाबिला गर्नुपर्ने भएकाले यसले नयाँ निर्णय गर्नुपर्यो । अब अमेरिकाको सामुन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रोजाइ सबै मुलुकबाट फिर्ता आएर आफ्नो मुलुकमा मात्र सीमित रहने कि विश्वव्यापी रणनीति बनाउने, दुई विकल्प छन् । एउटा पक्ष भन्छ, 'हामीलाई अरूको के मतलव, अरूलाई पनि हामीसँग के मतलव ? रुससँग किन मुकाबिला गर्ने ? हामी आफ्नै देशमा सीमित रहौँ । हामीसँग जसले सम्पर्क गर्छ, त्यसलाई सघाऔँ, अरूलाई मतलव नराखौँ । हामीलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने मजबुत भएर मुकाबिला गरौँ ।' अर्को पक्ष भन्छ, 'जसरी अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धमा नचाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अमेरिकाले आखिरमा आएर बाध्यतावश फस्नै पर्यो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले फस्नै पर्छ । तसर्थ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्छ ।' यतातिर हिन्द महासागर क्षेत्रको दियोगार्सियामा अमेरिकी गतिविधिबारे रुस समर्थक प्रेस, हिन्द महासागरमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर लेख्छन् । अमेरिकी पक्ष चाहिँ हिन्द महासागरमा रुसको प्रभुत्व बढ्यो, हामीले बल प्रयोग नगरी भएन भन्छ । मार्गरेट थ्याचरको भाषण तपाइर्ंहरूले सुन्नुभएकै होला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अब एसियामा आएको छ । यो कुरा मैले अढाई वर्षपहिले नै भनेको थिएँ । भारतीय पत्रपत्रिकामा तपाईंहरूले पढ्नुभयो होला । हाल कोलम्बोमा सम्पन्न असंलग्न सम्मेलनमा पास भएको प्रस्तावको पहिलो हरफमा भनिएको छ- अमेरिकीहरू भियतनामको युद्ध हारेपछि दक्षिण-पूर्वी एसियाबाट बाहिरिए । अब उनीहरू दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको केन्द्र बनाउँदै छन् । मैले भनेको भाषा अढाई वर्षपछि आएर उनीहरूले भने ।
"भियतनामबाट अमेरिकी फकर्ंदा मैले भनेँ, 'अब तिमीहरू सावधान होऊ । अब यस क्षेत्रमा आउने अमेरिकी शक्तिको तिमीहरूले मुकाबिला गर्नुपर्छ ।' त्यही क्रममा उनीहरूसित सिक्किमको कुरा चल्यो । सिक्किममा आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि सिक्किमलाई भारतमा गाभियो । त्यसले नेपालीहरूका बीचमा शंकाको वातावरण उत्पन्न भयो । त्यस विषयमा मलाई सोधियो, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ? मैले भनेँ-सिक्किम तिम्रै प्रभावमा थियो । यसरी विश्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल नराखी आफूमा मिलाउनुपर्ने कारण केही पनि देखिँदैन । तर, तिमीहरूले केही कारण देख्यौ होला । त्यस्तो कुनै बाध्यता अवश्य पर्यो होला । त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन । नत्र, त्यसरी सिक्किममाथि कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।"
"एउटा पक्ष भन्छ, 'हामीलाई अरूको के मतलव, अरूलाई पनि हामीसँग के मतलव ? रुससँग किन मुकाबिला गर्ने ? हामी आफ्नै देशमा सीमित रहौँ । हामीसँग जसले सम्पर्क गर्छ, त्यसलाई सघाऔँ, अरूलाई मतलव नराखौँ । हामीलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने मजबुत भएर मुकाबिला गरौँ ।' अर्को पक्ष भन्छ, 'जसरी अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धमा नचाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अमेरिकाले आखिरमा आएर बाध्यतावश फस्नै पर्यो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले फस्नै पर्छ । तसर्थ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्छ ।' यतातिर हिन्द महासागर क्षेत्रको दियोगार्सियामा अमेरिकी गतिविधिबारे रुस समर्थक प्रेस, हिन्द महासागरमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर लेख्छन् । अमेरिकी पक्ष चाहिँ हिन्द महासागरमा रुसको प्रभुत्व बढ्यो, हामीले बल प्रयोग नगरी भएन भन्छ । मार्गरेट थ्याचरको भाषण तपार्इहरूले सुन्नुभएकै होला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अब एसियामा आएको छ । यो कुरा मैले अढाई वर्षपहिले नै भनेको थिएँ । भारतीय पत्रपत्रिकामा तपाईंहरूले पढ्नुभयो होला । हाल कोलम्बोमा सम्पन्न असंलग्न सम्मेलनमा पास भएको प्रस्तावको पहिलो हरफमा भनिएको छ- अमेरिकीहरू भियतनामको युद्ध हारेपछि दक्षिण-पूर्वी एसियाबाट बाहिरिए । अब उनीहरू दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको केन्द्र बनाउँदै छन् । मैले भनेको भाषा अढाई वर्षपछि आएर उनीहरूले भने ।"
"सिक्किमलाई अवैधानिक ढंगबाट गाभ्नुपर्ने अरू कारण भए मलाई थाहा छैन । जे होस् मेरो उनीहरूलाई भनाइ थियो, भारतले त्यो कारबाही गरेर यस क्षेत्रलाई अप्रत्याशित रूपमा अस्थिर बनायो । अब हिन्दुस्तानले जुन पक्षसँग टक्कर लिन यो काम गर्यो, त्यस पक्षले भारतकै मिजोरमा वा अन्य भागमा वा बंगालादेशतर्फ आँखा लगाउँछ ।
मैले यस्तो भनेको ६ महिनापछि बंगालादेशमा 'कु' भयो । यसले अवश्य पनि हिन्दुस्तानलाई असर पुर्यायो । त्यसपछि एक दिन तिनीहरूले मलाई फेरि सोधे, 'यी सबै साम्भाव्य घटना तिमीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि क्या हो ?' मैले भनेँ, पहिले थाहा भएको होइन । यो त घटना क्रमको विश्लेषण गरेर थाहा पाइने कुरा हो ।'
"मैले भनेँ, 'यस क्षेत्रमा तिमीहरूले जसका विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छौ, यहाँ तिमीहरू मात्र छैनौ । सुरक्षाको प्रसंगमा त्यसले हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन ? उसँग हस्तक्षेप गर्ने अरू ठाउँ छैन । सबैभन्दा प्रमुख ठाउँ अहिले बंगालादेश नै भएको छ । त्यसैले अब त्यहीँ गतिविधि गर्छ ।' तर, बंगालादेश मात्र होइन, यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै अहिले गतिविधि गर्न सकिने ठाउँ जस्तो देखिएको छ । त्यसैले अहिले यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै अस्थिर क्षेत्र भएको छ ।"
"एउटा पक्ष भन्छ, 'हामीलाई अरूको के मतलव, अरूलाई पनि हामीसँग के मतलव ? रुससँग किन मुकाबिला गर्ने ? हामी आफ्नै देशमा सीमित रहौँ । हामीसँग जसले सम्पर्क गर्छ, त्यसलाई सघाऔँ, अरूलाई मतलव नराखौँ । हामीलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने मजबुत भएर मुकाबिला गरौँ ।' अर्को पक्ष भन्छ, 'जसरी अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धमा नचाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अमेरिकाले आखिरमा आएर बाध्यतावश फस्नै पर्यो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले फस्नै पर्छ । तसर्थ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्छ ।' यतातिर हिन्द महासागर क्षेत्रको दियोगार्सियामा अमेरिकी गतिविधिबारे रुस समर्थक प्रेस, हिन्द महासागरमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर लेख्छन् । अमेरिकी पक्ष चाहिँ हिन्द महासागरमा रुसको प्रभुत्व बढ्यो, हामीले बल प्रयोग नगरी भएन भन्छ । मार्गरेट थ्याचरको भाषण तपाइर्ंहरूले सुन्नुभएकै होला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अब एसियामा आएको छ । यो कुरा मैले अढाई वर्षपहिले नै भनेको थिएँ । भारतीय पत्रपत्रिकामा तपाईंहरूले पढ्नुभयो होला । हाल कोलम्बोमा सम्पन्न असंलग्न सम्मेलनमा पास भएको प्रस्तावको पहिलो हरफमा भनिएको छ- अमेरिकीहरू भियतनामको युद्ध हारेपछि दक्षिण-पूर्वी एसियाबाट बाहिरिए । अब उनीहरू दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको केन्द्र बनाउँदै छन् । मैले भनेको भाषा अढाई वर्षपछि आएर उनीहरूले भने ।"
सिक्किमलाई अवैधानिक ढंगबाट गाभ्नुपर्ने अरू कारण भए मलाई थाहा छैन । जे होस् मेरो उनीहरूलाई भनाइ थियो, भारतले त्यो कारबाही गरेर यस क्षेत्रलाई अप्रत्याशित रूपमा अस्थिर बनायो । अब हिन्दुस्तानले जुन पक्षसँग टक्कर लिन यो काम गर्यो, त्यस पक्षले भारतकै मिजोरमा वा अन्य भागमा वा बंगालादेशतर्फ आँखा लगाउँछ ।
मैले यस्तो भनेको ६ महिनापछि बंगालादेशमा 'कु' भयो । यसले अवश्य पनि हिन्दुस्तानलाई असर पुर्यायो । त्यसपछि एक दिन तिनीहरूले मलाई फेरि सोधे, 'यी सबै साम्भाव्य घटना तिमीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि क्या हो ?' मैले भनेँ, पहिले थाहा भएको होइन । यो त घटना क्रमको विश्लेषण गरेर थाहा पाइने कुरा हो ।' मैले भनेँ, 'यस क्षेत्रमा तिमीहरूले जसका विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छौ, यहाँ तिमीहरू मात्र छैनौ । सुरक्षाको प्रसंगमा त्यसले हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन ? उसँग हस्तक्षेप गर्ने अरू ठाउँ छैन । सबैभन्दा प्रमुख ठाउँ अहिले बंगालादेश नै भएको छ । त्यसैले अब त्यहीँ गतिविधि गर्छ ।' तर, बंगालादेश मात्र होइन, यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै अहिले गतिविधि गर्न सकिने ठाउँ जस्तो देखिएको छ । त्यसैले अहिले यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै अस्थिर क्षेत्र भएको छ ।"
यतातिर हिन्द महासागर क्षेत्रको दियोगार्सियामा अमेरिकी गतिविधिबारे रुस समर्थक प्रेस, हिन्द महासागरमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर लेख्छन् । अमेरिकी पक्ष चाहिँ हिन्द महासागरमा रुसको प्रभुत्व बढ्यो, हामीले बल प्रयोग नगरी भएन भन्छ । मार्गरेट थ्याचरको भाषण तपाइर्ंहरूले सुन्नुभएकै होला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अब एसियामा आएको छ । यो कुरा मैले अढाई वर्षपहिले नै भनेको थिएँ । भारतीय पत्रपत्रिकामा तपाईंहरूले पढ्नुभयो होला । हाल कोलम्बोमा सम्पन्न असंलग्न सम्मेलनमा पास भएको प्रस्तावको पहिलो हरफमा भनिएको छ- अमेरिकीहरू भियतनामको युद्ध हारेपछि दक्षिण-पूर्वी एसियाबाट बाहिरिए । अब उनीहरू दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको केन्द्र बनाउँदै छन् । मैले भनेको भाषा अढाई वर्षपछि आएर उनीहरूले भने ।"